Wafdi uu hogaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo gaaray magaalada Baydhabo – idalenews.com
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee Gobolka Bay, halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyay.
Booqashada Prof. Jawaari ayaa ah tii u horeysay oo uu Baydhabo ku tago tan iyo markii loo doortay xilka Afhayeenka Baarlamaanka, iyadoo socdaalkiisa ay ku soo beegantay, xilli Ciidamada Itoobiya ay ka baxayaan Bay iyo Bakool.
Gudoomiye Jawaari ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Xildhibaano horay ugu sugnaa, maamulka gobolka iyo saraakiil, iyagoo loo gelbiyay Madaxtooyada Baydhabo.
Waxyaabaha uu u tagay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah inuu u kuur galo xaalada ammaanka iyo arrinta ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya, kadib markii si lama filaan ah todobaadkii hore uga baxeen magaalada Xudur.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada Baydhabo ku qul qulayay Xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan AMISOM, kuwaasoo ciidamada Itoobiya kala hadlayay in aanay ka bixin Gobolka.
Hadal heynta ku saabsan ka bixitaanka Itoobiyaanka ee gobolada dalka ayaa aheyd mid si weyn u hareysay siyaasada dowladda, iyadoo Shabaabka ku tilmaameen hadii ay Ciidamada Itoobiya baxaan inay u tagay fursad ay dib ugu qabsan karaan deegaanadii lagala wareegay.